Thunderbolt na-egbu iPhone | Martech Zone
Thunderbolt na-egbu iPhone
Thursday, June 2, 2011 Na Tọzdee, Septemba 4, 2012 Douglas Karr
Walter Piecyk, BTIG Nyocha Onye nyocha ahụ na-ekwu na HTC Thunderbolt na-apụ iPhone na 28% nke ụlọ ahịa Verizon. Amaara m ihe kpatara ya.
N’ọnwa a, anyị na-agbanye ụfọdụ ederede na ngwaọrụ mkpanaka. Ghọta nkà na ụzụ nke a na-anakwere dị mkpa ka ndị ahịa ghọta. Uto Intaneti n’aga n’etuto n’ike n’ike karie onye obula turu anya ya. Otu ihe atụ: nchọta nke Chrysler n'oge Super Bowl gbagoro ugboro 48 karịa olu nkịtị nke ajụjụ desktọọpụ, mana nyocha na mkpanaka bụ 102 ugboro. GoDaddy hụrụ ugboro 38 dị elu karịa ajụjụ nkịtị, yana ekwentị na-agbago 315 ugboro.
Ngwaọrụ dị ka Verizon si HTC Thunderbolt na-emeghe ụzọ maka uto a. Nke a bụ a ikpọ gam akporo ekwentị. Mgbe m nyochachara ya otu ọnwa, ahụrụ m ya n'anya nke ukwuu nke na m gara zụta nwelite ahụ. Ekwesịrị m inwe ya. Ekwentị ahụ dị mma… ma buru ibu. Some folks may find it too big… m isi mkpịsị aka nwere ike sonso slide gafee nnukwu ihuenyo. N'akụkụ n'akụkụ na iPhone 4, iPhone dị ka ọ dị oke egwu ... ihe ndị ahụ enweghịdị mmetụta dị oke egwu. Dị ka iPhone 4, a na-etinyekwa Thunderbolt na igwefoto nke abụọ.
Cheta na: Azụrụ m nwa m nwanyị iPhone 4 maka mba m (mba, ọ chọghị Thunderbolt) ka m nwee ike ịgbanwe ya na Verizon. Mkpuchi AT&T na ịgba ụgwọ dị egwu. Aga m echekwa ego ole na ole, nwee ụgwọ ezinụlọ otu ọzọ, ma nweta mkpuchi ka mma na-enweghị oku na-ada.
Mụ na Droid Pro rụkọrọ ọrụ maka afọ gara aga ma ọ bụ hụ ya n'anya, mana mkpịsị aka m mara abụba na keyboard. N'ụzọ dị ịtụnanya, keyboard ahụ a na-ahụ anya na Thunderbolt buru ibu karịa keyboard nkịtị na Droid Pro. M nwere ike pịnye nnọọ mfe - karịsịa mgbe m na-atụgharị ya kehoraizin! Mgbe na-ele anya azụ na-apụta n'etiti meziri ikpeazụ nke ọnwa… M nnọọ ike itinye Thunderbolt.
Ndị a bụ Droid Pro, HTC Trophy, na HTC Thunderbolt n'akụkụ n'akụkụ:
Enwekwara m ike ịnwale HTC Trophy, Windows Phone 7 ngwaọrụ. Emegbula Windows Phone 7 interface njirimara onye ọrụ abụghị naanị ọ mara mma, ọ dị mfe ịnyagharịa karịa iPhone ma ọ bụ gam akporo n'echiche m. Ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ na teknụzụ dị ka m agaghị agagharị na Windows Phone 7, ahịa azụmaahịa ụlọ ọrụ bụ nnukwu. Egosiri m ya otu nwa amadi nọ n'ụgbọ elu mụ na ya rida n'Atlanta wee sị na ọ gaghị echeli olulu bụ Blackberry maka otu. Oge ga - agwa - mana ọ naghị esiri m ike na Microsoft apụla n’ọsọ ọ bụla oge adịghị anya ebe ọ bụ na ha nwere ozi ụlọ ọrụ.
O di nwute, echeghị m na ngwaike nke HTC Trophy ruru ihe sistemụ arụmọrụ. Igwefoto n’onwe ya na-esi isi. Na foto dị n'aka ekpe, ị ga-ahụ foto Thunderbolt (8 Megapixel) n'aka ekpe, Trophy (5 Megapixel) n'aka nri. Maka vidiyo, Thunderbolt na-edekọ na 720 HD… yabụ m ga - emesịa gbochie idebe vidiyo vidiyo na - esere m ebe ọ bụla m na - aga. Otu pụrụ iche imewe mma bụ mgbodo na azụ na akwusila iji guzo ekwentị kwụ ọtọ upright jụụ echiche! Ọ bụ oge abalị m n’akụkụ akwa m n’abalị ụnyaahụ.
Naanị mkpesa m nụrụ banyere Thunderbolt bụ ndụ batrị. Achọghị m ịma n'ezie. Ana m eji batrị USB na chaja na-eme njem mgbe niile. Enweghị m ike ịkwụsị ile anya na ihuenyo. Enwere m ọchịchọ ịmata ma igwefoto igwefoto ọhụrụ a bụ njedebe maka iPhone. Ihe gam akporo na Windows ekwentị 7 sistemụ arụmọrụ dị elu, igwe ọhụụ a na-akawanye mma kwa ụbọchị.
Tags: iphoneégbè eluigwe
Mmekọrịta Social Media na Nlaghachi na Investment
Na-akụda! A Twitter Soro Button
Jun 3, 2011 na 2:08 AM
Achọrọ m ka Verizone nweta otu n'ime ekwentị Google Nexus. Anaghị m abanye na nnukwu ihuenyo mana m hụrụ gam akporo n'anya (ọ bụ ezie na ngwaike Droid Eris anaghị arụ ọrụ nke ijikwa ihe ọ bụla gara aga di na nwunye mbụ gam akporo). Ekwentị m ọzọ ga - abụ gam akporo, amachaghị m nke ị ga - eme.
Echere m na nke a bụ nnukwu ozi ọma maka Google, mana ozi ọma maka ụlọ ọrụ ekwentị na ndị na - ebu ya - kwa ụbọchị anyị na - adabere na igwe ndị a. Anyị enweghị Thunderbolt na obodo muy (Colombia), mana ọ bụ ozi ọma ịnwe ezigbo iPhone ọzọ. Kwesịrị ichere ma hụ ihe ga-eme na ịhapụ iPhone ọzọ.
Naanị nwetara Thunderbolt na m hụrụ ya n'anya! Ọ bụ ekwentị dị egwu gburugburu, yana site na Amazon Wireless, enwetara m ya maka $ 130, nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ego 50% karịa ịzụrụ ya site na izonlọ Ahịa Verizon. Oge ga-agwa, ma nkeji ọ bụla m na-eji Thunderbolt, M na-ahụkwu ya n'anya.